Tonga soa eto amin'ny Zhejiang Kavoun Auto Parts Co., Ltd (tany am-boalohany niresaka momba ny Ningbo Hi-Tech Zone Kavoun Transmission Parts Co., Ltd)
Ny orinasa dia matihanina mpanamboatra milina sy ny mpanondrana ny nandroahana faritra sy ny fampitana fehikibo. Taorian'ny folo taona mahery ny fampandrosoana, mihoatra ny am-polony sy tanàna faritany no natsangana mba hanome fivarotana-baovao miaraka amin'ny teknisiana matihanina sy ny varotra ekipa matihanina, ary mafy ny fampandrosoana ara-teknika hery. Izahay nandalo ny ISO9001: 2000 toetra rafitra fitantanana ny taratasy fanamarinana sy ny fampiharana ny rafitra fitantanana tsara TS16949 fenitra.
Ny tena vokatra ao amin'ny orinasa dia "KAVOUN" sy "XIAOHUOBAN" marika HNBR Timingbelt sy CR Timingbelt, avo roa heny-manenjika fitaovana synchronous fehikibo, Variable hafainganam-pandeha V fehin-kibo, fiara V fehin-kibo, fiara fotoana fehin-kibo, maro anja fehin-kibo, hanenjanana kokoa kodia, synchronous fehikibo kodia, fehin-kibo kodia, paompy, wiper, nofonosiny V-fehin-kibo, ary ny hafa fifindran'ny faritra. Efa Nampiasaina be teo amin'ny fiara, fitaovana milina, lamba, sigara, Orinasa, sakafo, fitaovana elektrika, fonosana, ankohonany herinaratra fitaovana, toeram-pitrandrahana, injeniera fitaovana sy ny orinasa hafa.
Ny vokatra izay namanay no mampiavaka ny teknolojia avo, avo lenta, tsara toetra, be taona fanoherana, harafesiny fanoherana, ny hafanana avo fanoherana, tsara tarehy tarehy, mateza sy mateza sy ny sisa. Efa nahazo avo fiderana avy amin'ny mpanjifa nivarotra ny fananany rehetra manerana izao tontolo izao.
Manomboka amin'ny vaninandro ny nahaterahany, ny orinasa, manaraka ny pinoany ny "fampiroboroboana ny fampandrosoana amin'ny siansa sy ny teknolojia, naka kalitao tahaka ny fototra sy ny mpanjifa mifantoka", dia hampivelatra ny fanahin 'ny "faharetana, ny fanavaozana sy ny kilasy voalohany". Amin'ny alalan'ny teknolojia zava-baovao, zava-baovao sy ny fitantanana ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny teknolojia vaovao sy avo ny vokatra, ny orinasa Manatsara foana ny teknolojia afa-po ny vokatra, ary dia ho an'ny orinasa sy ny orinasa. Mpanjifa mandresy marani-tsaina kokoa rahampitso.